Olee otú Iji Nyochaa Cell Phone Text Ozi N'ihi Free
Ọ bụrụ na ị na-achọ ụzọ kasị mma nyochaa ekwentị nwa gị, na nwunye, ebe, ọrụ, n'ịghọ aghụghọ ule na enyi nwanyị, enyi nwoke ma ọ bụ nwunye, anyị na-anwale ma enyocha ụfọdụ top free ekwentị nlekota oru ọrụ.
Ụfọdụ n'ime ndị a ekwentị nsuso ngwa ma ọ bụ omume bụ free na ụfọdụ na-eri a kwa ọnwa ego. Ndị kasị chọrọ atụmatụ nke ekwentị nsuso na-agụ a mmadụ SMS ederede ozi na-enweghị onye ọzọ maara. Ọ bụrụ na nwa gị kemgbe-adaba ná nsogbu ma ọ bụ na ị na-enyo anyị enyo nke nwunye gị nke n'ịghọ aghụghọ ule, mgbe ahụ ndị a ekwentị ọrụ trackers pụrụ n'ezie inyere gị aka ịghọta ọnọdụ. Ndị a dị iche iche nke cell ekwentị ebe osisi omume na-emekarị na nzuzo arụnyere na a mmadụ iPhone ma ọ bụ gam akporo ekwentị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-nbanye a website na kọmputa nke desktọọpụ. Ozugbo ite ke ị ga-pịnye chọrọ Ama jikọọ ekwentị gị arụnyere na ngwa na. Ị ga-ahụ ga-enwe ike ịhụ na mmadụ ebe ke ezigbo oge, na-agụ ihe niile nke ha SMS ederede ozi na-enweghị ihe ọmụma ha (inbound na outbound) ma na-ahụ igwe zuru ezu oku akụkọ ihe mere log (inbound na outbound).
ExactSp-SMS Tracker maka gam akporo FREE na mma Android ngwa ga-ekwe ka ị remotely soro ma nyochaa SMS, MMS, ederede ozi, oku, na GPS ekwentị ebe. Nke a ederede nlekota oru ngwa bụ ihe kasị ke omimi ime nsuso na nlekota usoro maka gam akporo ekwentị ọrụ. Ị dị nnọọ wụnye SMS Tracker na iche na ekwentị na ị chọrọ inyocha. Ị nwere ike mgbe ahụ remotely agụ ihe niile SMS Text ozi (inbound na outbound), MMS multimedia ozi, foto niile zitere na natara, na-ele mmadụ ekwentị oku na ndekọ (gụnyere mmadụ aha, nọmba ekwentị, na ogologo oge ha na-ekwu na onye) ma na-ele zuru ezu web nchọgharị akụkọ ihe mere remotely. I nwekwara ike ile lekwasịrị mmadụ GPS ozi ọnọdụ na a map ịhụ kpọmkwem ebe ha bụ ndị na ihe oge. Onye ma ọ bụ kwụsị ị na-nsuso ga-maara na ị na-ekiri n'ebe ọ bụla enyo, ọ bụla oku na ihe ọ bụla ederede. All nke ozi a nwere ike anya remotely na ihe ọ bụla na ihe nchọgharị weebụ gụnyere ekwentị gị, mbadamba nkume ma ọ PC. Ndị nne na nna nwere ike ugbu a nwere ihe dị free ngwá ọrụ iji nyere na-gị na ụmụaka mma ọbụna mgbe ị na-adịghị na ha.
Free ekwentị nlekota oru software
Olee otú Iji Nyochaa Cell Phone Text Ozi N'ihi Free – Isi nke exactspy
Ị nwere ike Download: Olee otú Iji Nyochaa Cell Phone Text Ozi N'ihi Free ?
Cell phone spy for iphone 4 free, Free ekwentị nlekota oru software, Free mobile inyocha ngwa n'ihi na iphone, Free mobile nledo software n'ihi iphone, Olee otú Iji Nyochaa Cell Phone Text Ozi N'ihi Free, Spyware n'ihi na ekwe ntị